FIFAMOIVOIZANA Feno kamiao miditra eto an-drenivohitra amin’ny ora tsy
voafetra. Izany no isan’ny miteraka ny fitohanan’ny fifamoivoizana manerana ny tanàna.
Toe-javatra izay tsy mitombona ary tsy hitombona mihitsy raha ny fanazavan’ireo mpandinika momba izany satria hamono antoka ny orinasa izany na sanatria ho atao aza. Miandry ny fanapahan-kevitry ny minisitra tompon’andraikitra moa mikasika ity kaonty fako fa fanaparitahana vaovao tsy marina ity .
ARTISTA TE HO DEPIOTE
Miisa 15 eo izany ireo artista mikasa ny ho lasa depiote raha jerena amin’ireo nahavita nanatitra dosie. Miankina amin’ny fanapahan-kevitry ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana anio ihany anefa ny mikasika ireo mety ho voaray na tsia.
Mandeha ny feo ankehitriny fa mety ho tantanan’ny orinasa Ambatovy ny fanatanterahana ilay tetikasa fanovana an’i Toamasina ho lasa toa an’i Miami. Tsy mbola nisy vaovao ofisialy mikasika an’izay moa hatreto fa ho hita eo ny tohiny.